Dagaal Khasaare geystay oo xalay ka dhacay Degmada Qoryooley – STAR FM SOMALIA
Dagaal u dhaxeeyay ciidamada Amisom iyo kuwa Al-Shabaab ayaa xalay wuxuu ka dhacay Degmada Qoryooley ee Gobolka Shabellaha Hoose, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan.
Al-shabaab ayaa la sheegay in ay weerar ku soo qaadeen degmadaasi, gaar ahaan goob ay fariisin ku lahaayeen ciidamada Amisom, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xooggan.
Inta la xaqiijiyay Labo ruux oo shacab ah ayaa dagaalkaasi ku geeriyootay 7 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii madfac uu ku dhacay masjid ku yaalla Degmadaasi.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in dadka dhaawacmay qaarkood xaalad ahaan ay aad u liitaan, sidoo kalena ay jiraan dad dhaawacyadooda aan degmadaasi wax looga qaban karin.
Labada dhinac oo madaafiic is weydaarsanayey inta dagaalka uu socday ayaa ku dhacay meello badan oo ka baxsan halka lagu dagaallamay, waxaana Khasaare uu soo gaaray dad rayid ah.
Taliska Amisom iyo Al-Shabaab weli kama aaney hadal dagaalladan, xaaladda guudna saakay waxay tahay mid degan.
Maamulka Degmada ayaa sheegay inay faah-faahin ka bixin doonaan dagaalka xalay ka dhacay Degmada Qoryooley.